Atresia Ani In Babies (ကလေးငယ်များတွင် စအိုပေါက်ကျဉ်းခြင်း (သို့) အပေါက်မပါခြင်း) - Hello Sayarwon
Atresia Ani In Babies (ကလေးငယ်များတွင် စအိုပေါက်ကျဉ်းခြင်း (သို့) အပေါက်မပါခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Atresia Ani In Babies (ကလေးငယ်များတွင် စအိုပေါက်ကျဉ်းခြင်း (သို့) အပေါက်မပါခြင်း)
Atresia Ani In Babies (ကလေးငယ်များတွင် စအိုပေါက်ကျဉ်းခြင်း (သို့) အပေါက်မပါခြင်း) ကဘာလဲ။
Atresia ani ဆိုသည်မှာ ကလေးတွင် စအိုအပေါက်ကျဉ်းခြင်း (သို့) စအိုပေါက်မပါခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ အကယ်၍သင့်ရဲ့ ကလေးမှာ စအိုပေါက်မပါခြင်း(သို့) ကျဉ်းခြင်းဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ သူတို့ရဲ့အူ ဒါမှမဟုတ် အူရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဟာ ကောင်းကောင်းဖြစ်မလာပဲ ပိတ်ဆို့နေခြင်း (သို့) ကျဉ်းမြောင်းနေခြင်းဖြစ်နေပါပြီ။ အချို့ကလေးတွေမှာတော့စအိုပေါက်လုံးဝမပါတာမျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။
အူသိမ်ဟာ အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းမှာ ကျဉ်းနိုင်ခြေအနည်းဆုံးနေရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေအနေအရမ်းဆိုးနေပြီဆိုရင်တော့ ချက်ချင်း ကုသမှုခံယူရပါမယ်။ ကလေးအများစုဟာ ဒီလိုချို့ယွင်းချက်ကိုပြုပြင်ဖို့အတွက် ခွဲစိတ်ကြရပါတယ်။ စိတ်မကောင်းစရာကတော့ ဒီလိုကလေးတွေမှာ စအိုကျဉ်းခြင်း (သို့) အပေါက်မပါခြင်း ဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတာ မသိရပါဘူး။
Atresia Ani In Babies (ကလေးငယ်များတွင် စအိုပေါက်ကျဉ်းခြင်း (သို့) အပေါက်မပါခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ကလေးများတွင်စအိုကျဉ်းခြင်း (သို့) အပေါက်မပါခြင်းဟာ အဖြစ်များတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မွေးကင်းစကလေး အယောက် ၅၀၀၀ မှာတစ်ယောက်ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ မိန်းကလေးများထက် ယောက်ျားလေးများတွင် ပိုတွေ့ရပါတယ်။ စအိုကျဉ်းနေခြင်းသည်ကလေးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုများစွာထိခိုက်စေပါတယ်။ အန္တရာယ်ဖြစ်စေတာတွေကိုရှောင်ရှား၍ စအိုကျဉ်းခြင်း (သို့)မပါရှိခြင်းကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီးသိရဖို့တော့ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Atresia Ani In Babies (ကလေးငယ်များတွင် စအိုပေါက်ကျဉ်းခြင်း (သို့) အပေါက်မပါခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ဆီးစွန့်အဖွဲ့အစည်းနှင့်အူများကြားတွင်ပုံမမှန်သောဆက်သွယ်မှုရှိနေပြီး ဆီးထဲတွင်မစင်များပါလာတတ်သည်။ ဥပမာ- ဆီးစွန့်ပြွန်၊ မိန်းမကိုယ်၊ ကပ်ပယ်အိတ်( သို့)လိင်တံရဲ့အရင်းမျိုးမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။
မွေးမွေးချင်း၂၄နာရီကနေ ၄၈ နာရီအတွင်းဝမ်းမသွားခြင်း။
စအိုကျဉ်းနေသောကလေးငယ်များတွင်ပုံမှန်မဟုတ်သော အခြား ချို့ယွင်းမှုများလည်း ရှိပါသေးတယ်။
မွေးရာပါ အူမကြီး ကြီးသော (Hirschsprung) ရောဂါရခြင်း။
အကယ်၍သင့်မှာ အထက်ဖော်ပြပါလက္ခဏာတွေထဲက တစ်ခုခုရှိနေပြီဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ပြသသင့်ပါပြီ။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တုံ့ပြန်ပုံချင်းမတူညီကြပါဘူး။ အကောင်း ဆုံးအကြံဉာဏ်ကိုရရှိဖို့ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Atresia Ani In Babies (ကလေးငယ်များတွင် စအိုပေါက်ကျဉ်းခြင်း (သို့) အပေါက်မပါခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ကလေးများတွင် စအိုပေါက်ကျဉ်းစေသော အကြောင်းအရာကို ယခုအချိန်ထိမသိရှိရသေးပါ။ ဖြစ်နိုင်တာကတော့မွေးရာပါ မျိုးရိုးဗီဇ ချို့ယွင်းချက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးအခြေအနေဟာမမွေးမီ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်၅ လမှ ၈ လ အတွင်းမှာပင် ချို့ယွင်းနေတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမှာသင့်ကလေးရဲ့အစာခြေစနစ်ဟာဖွံ့ဖြိုးနေပြီး အထူးသဖြင့်စအိုဟာ ဖြစ်ပေါ်စပြုနေပါပြီ။
ငါ့ဆီမှာ Atresia Ani In Babies (ကလေးငယ်များတွင် စအိုပေါက်ကျဉ်းခြင်း (သို့) အပေါက်မပါခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ကလေးငယ်များတွင်စအိုကျဉ်းခြင်းသည် ယောက်ျားလေးများသည် မိန်းကလေးများထက် ဖြစ်နိုင်ချေနှစ်ဆပိုပါတယ်။
အခြားမွေးရာပါချို့ယွင်းချက်များရှိနေခြင်းနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်တွင်မိခင်သည်စတီး ရွိက်ရှူဆေးများ ရှူခြင်းသည် စအိုဝကျဉ်းခြင်း (သို့) အပေါက်မပါခြင်းကို ပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။
Atresia Ani In Babies (ကလေးငယ်များတွင် စအိုပေါက်ကျဉ်းခြင်း (သို့) အပေါက်မပါခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
မီးမဖွားမီတွင်ကလေးရဲ့အစာခြေလမ်းကြောင်းတွင် ပိတ်ဆို့ခြင်းရှိမရှိနဲ့ တခြားပုံစံမမှန်တာတွေရှိမရှိ သိရဖ့ို မိခင်ကို အယ်ထရာစောင်းရိုက်ရပါတယ်။ အကယ်၍သင့်ရဲ့ဆရာဝန်ဟာ ရေမြွှာရေတွေအများကြီးကိုတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ ဒါဟာအစာရေမြိုကျဉ်းနေခြင်း(သို့) အစာခြေလမ်းကြောင်းတွင် ပိတ်ဆို့မှုတစ်ခုခုရှိနေတဲ့ လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးများတွင်စအိုကျဉ်းခြင်း (သို့) အပေါက်မပါခြင်း ရှိမရှိကို မွေးပြီးပြီးချင်းမှာပဲ စအိုကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဝမ်းဗိုက်ကို ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း သို့ အယ်ထရာစောင်းရိုက်ခြင်းဖြင့် ရောဂါရှိမရှိကိုအတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။
သင့်တော်သောကုသမှုများပြုလုပ်ဖို့အတွက် စအိုကျဉ်းခြင်း (သို့) အပေါက်မပါခြင်း နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့အခြားပုံစံမမှန်တာတွေကိုလည်း စစ်ဆေး ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ စစ်ဆေးတာတွေကတော့
ကျောရိုးမကြီး၏ အရိုးဆစ်များ၊ အရိုးများပုံစံမှန်မမှန်သိရရန အာထရာဆောင်းရိုက်ခြင်း
နှလုံးပုံစံမှန်မှန် သိရဖို့အတွက် နှလုံးကို echocardiogram ရိုက်ခြင်း၊
အစာရေမြိုနှင့်လေပြွန်ဆက်နေခြင်း ရှိမရှိအတည်ပြုနိုင်ရန် သံလိုက်ဓါတ်မှန် (MRI) ရိုက်ခြင်း တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Atresia Ani In Babies (ကလေးငယ်များတွင် စအိုပေါက်ကျဉ်းခြင်း (သို့) အပေါက်မပါခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
စအိုကျဉ်းသည့်ကိစ္စအများစုတွင် ပိတ်နေတာကိုဖယ်ရှားရန် ခွဲစိတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကျဉ်းနေခြင်း (သို့) ပိတ်နေသည့်အပေါ်တွင် မူတည်၍ ဆရာဝန်များသည် သင့်တော်သော ကုသမှုများကို ရွေးချယ်ကုသကြပါတယ်။
အကယ်၍အူဟာ စအိုနှင့်ဆက်၍မနေလျှင် ဆက်သွားစေရန်ခွဲစိတ်ရပါတယ်။
အကယ်၍အူလမ်းကြောင်းနဲ့ ဆီးလမ်းကြောင်းဟာဆက်နေလျှင် စအိုကိုနေရာမှန်ပြန်ရောက်စေရန် စအိုပြုပြင်ခြင်းကိုပြုလုပ်ရပါတယ်။
အူကိုခွဲစိတ်ခြင်းပြုလုပ်၍ ဝမ်းဗိုက်တွင်အပေါက်ဖောက်ထားကာ ခွဲစိတ်ထားသောအူကို ဝမ်းဗိုက်အပြင်သားနှင့် တွဲချုပ်ထားပြီး အညစ်အကြေးများကို ခန္တာကိုယ်အပြင်ဘက်ရှိ အိတ်အတွင်းသို့ ရောက်စေရန် ပြုလုပ်ရပါသည်။
စအိုကျဉ်းခြင်း (သို့) အပေါက်မပါခြင်းကို သက်သာစေမယ့် နေထိုင်မှုပုံစံတွေနဲ့ အိမ်တွင်းကုထုံးတွေကဘာတွေလဲ။
ခွဲစိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ သင့်ရဲ့ဒဏ်ရာကိုသက်သာစေဖို့အတွက် သက်ဆိုင်သူဆီမှညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာရပါမယ်။
သင့်ရဲ့ကလေးအခြေအနေကို သိရဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ မကြာခဏသွားရောက်ပြသရပါမယ်။
ဝမ်းချုပ်ခြင်းမှာကာကွယ်ရန်အတွက် သင့်ကလေးရဲ့စာသောက်နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်သာသွားသည့် အလေ့အထကို ပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။
အူထဲတွင်ရှိသော အာရုံကြောများကိုလှုံ့ဆော်သော ပစ္စည်းများအသုံးပြုပါ။
လိုအပ်လျှင် အူလမ်းကြောင်းထိန်းချုပ်မှုကောင်းစေရန် အခြားခွဲစိတ်မှုထပ်မံလုပ်ရပါမည်။
အကယ်၍ သင့်မှာ သိလိုသော မေးခွန်းများရှိလျှင် အကောင်းဆုံးသောအဖြေကိုရဖို့ သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။
Atresia Ani in Babies. http://www.healthline.com/health/imperforate-anus#Treatment4. Accessed July 16, 2016.
Anal Atresia. http://www.mountsinai.org/patient-care/health-library/diseases-and-conditions/anal-atresia. Accessed July 16, 2016.
Atresia, Stenosis, and Other Obstruction of the Colon. http://emedicine.medscape.com/article/934014-overview. Accessed July 16, 2016.